Humna Addaa Poolisii Oromiyaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaa Giddutti Dhukaasni Banamutuu Barame |
Home Afaan Oromoo Humna Addaa Poolisii Oromiyaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaa Giddutti Dhukaasni Banamutuu Barame
Humna Addaa Poolisii Oromiyaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaa Giddutti Dhukaasni Banamutuu Barame
Humna Addaa Poolisii Oromiyaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaa Giddutti Dhukaasni Banamutuu Barame.
(Ezel Oromia Fulbaana 12, 2019)Boonbii Mooraa Hidhattoota Magaalaa Burraayyuu Irratti Darbatameen Wal Qabatee Ergaa Qondaala Ol aanaa Tika Mootummaa!
Miidhaa Poolisoota Oromiyaa irratti ta’e kana Sababa hojiin Magaalaa Burraayyutti Argamuun Qondaalli Tika mootummaa Olaanaan Sabaan Oromoo ta’an yoo barbaaddan maqaa koo waliin baasaa maxxansaa jechuun miira aariin nuuf Ibsaniiru. Boonbii Caasa Dr.Abiyiin Mooraa Hidhattoota Magaalaa Burraayyuu Irratti Taasifameen Maqaa Tarrisa Namoota Madoo Ta’an lakkoofsaan 7 gahuus maqaa isaanii waliin himaniiru.Yaada isaan nuuf kennan akka itti aanutti isiniif dhiheesina.
“Yakki dabaa ijoollee keenya irratti raawwachuu kan eegale gaafa Qaam’ee 6 saa’atii 10:22 irratti. Murna kophatti hafeen Masaraa mootummaa irraa ergamuun bu’aa siyaasaaf jecha ijoollee keenya irratti kan raawwatamee dha. Guyyaa kaleessaa sababa Ayyaanaaf Iddoo poolisiin Oromiyaa nageenya ummataa kabajisiisuuf jiranitti, murni Masaraa mootumichaa irraa ergamuun ramaddii isaa malee Poolisii Oromiyaa Burraayyuu jiran keessa makatetuu ture.
Poolisiin Oromiyaa dirqamaan ala isaan biratti argamuuf gaaffii waan gaaffataniif dallansuun masaraa mootummaati murni kun bilbilatee sana booda miirri aarii fi tasgabbii hin qabne Murna Caasaa Dr.Abiyii fi Ijoollee keenya Poolisii Oromiyaa jiddutti uumamee ture.
Sababa Ayyaanaaf Miseensotaa fi deegartoota ABO naannoo sana jiran qabuuf jecha karrora qindaa’e ture,Sana booda murni kophatti hafe kun Poolisii kora bittanneessaa kana irratti miidhaa gaggeessuuf jecha erga Poolisii Oromiyatti dhaadatee booda, masara mootummaa irraa humna addaa gargaarsaaf yaamatee ture.
Haala deemaa jiru kanaan Qeerroon naannoo sana turan aarii keessa seenuun, Waajjira OCI kan naannoo sanatti argamutti bilbiluun Poolisii Oromiyaa murna kanaan tuffatamuun doorsifamaniif akka birmataniif kaleessa Qaam’ee 6,2011 saa’atii 10:42tti bilbilatan.
Murna gargaarsa gaafate kanaaf qaamni masaraa irraa gargaarsaaf dhufeef ammoo saa’atii 11:17namoonnii 37 naannoo sanatti konkolaataa Hondaay cufaa/mastaawatiin hin agarsifneen dhufan. Ergasii saa’atii 11:22tti humni addaa OCI Qeerroon akka Kora bittanneessaa Oromiyaa gargaaruuf yaammame Namoonni 12 argamaniiru.
Murni ergama addaa fudhatee jeequmsa uumuuf naannoo sanatti argamee ture saa’atii 12:13 iirratti KoIjoolee Keenya KPoolisii Kora Bittanneessaa fi Ijjooleen Waajjira OCI irraa dhufan tumsa waliif godhaniin Murni kun Gidajii itti taanaan dirqisiifamuun bakka irraa deebi’anitti of duuba deebi’aniiru; kun haala guyyaa kaleessaa ta’e yoo ta’u, Guyyaa har’aa ammoo murna kaleessa sana keessaa Alaabaa ABO shaneen kan faayame huccuu aadaa Oromoo uffachuun guyyaa keessa toora saa’atii 7:00tti naannoo sana galanii qaama nageenyaa naannoon hordofamaa turan.
Jarri kun afaan Oromoos caccabsanii haasawu turan, hordoffii irratti taasisanii Qeerroon naannoo sanaa gabaasee ture, sana booda garuu konkolaataa Waajjira OPDOn miliqfamaniiru. Boonbii ijoollee keenya kana irrattI kan darbate, qaama jara irraa duubatti hafeedha.
Osoo Boonbiin hin darbatamin dura ammoo miseensonni OPDO Abaan Torbee magaalaa kana keessatti Boonbii darbachuu heda jechuun Hawaasa naannoo dhoorkataa turan ; Erga Boonbii ijoolee keenya irratti darbatanii booda jeequmsa keessa ummata buusuun naannicha weeraranii warra kaleessa qabuuf karoorfatan sanneen guuruu eegalan.
Rakkoo erga uumanii booda ijoolleen keenyarraan Miidhaa dhaqqabsiisanii, Ijoolee miidhamaniif ummanni keenya deegarsa akka hin gooneefis dhiibaa taasisaa turan. Ijoolleen Poolisaa miidaman kunneen daddaffiin yaalas argachuu hin dandeenye. Poolisoota miidhaman mana yaalaa geessuun kan danda’ame erga ijoolleen Oromoo Poolisii Federaala Keessa jiran Ambulaansii nuuf fidaniiti.
caasaan Kora bittanneessaa Oromiyaa dabalatee qaamni nageenyaa bulchiinsa Obbo Shimallisiii fi Warra Federaalaa waliin hin jirru; erga adda baanee turreera,nuti qajeelfamas isaan irraa fudhataa hin jirru.
Kan isaan miidhaa kana Maqaa Abbaa Torbee jedhuun, Ijoollee Poolisootaa keenya irratti fudhataniif humna Oromoo wal beekee Oromoof jecha hojjetaa jiru kana diiguufi, Tokkummaa Ummata Oromoo kana bittanneessufi. Kanaa fi kan bakka hundatti ilmaan Oromoo sababa adda adda itti maxxansuun manneen hidha garaa garaatti guuraa jiraniif.
Kanaaf ummanni keenyas haqa jiru kana nuuf hubachuu qaba, nuti hanga Waaqayyo mootummaa ofii keenyaa nuuf godhutti bakka jirrutti ummata keenya tajaajiluuf du’aa jirra. Ummanni Keenya yoo rakkoon tokko kan nurra gahu ta’e nuuf birmachuu qaba, Sirni amma ummata keenya keessatti nu hojjechiisuuf yaalu kun sirnuma kale sirunma Wayyaaneeti, Naannoo net workn hin jirrettis sagalee keenya yoo dhabdan akka diinaan waliin wal’aansoo qabne ummanni keenya nuuf hubachuu qaba.
Miidiyaaleen Oromoo ammoo Oromiyaa Keessatti mootummaan caasaa akka nu waliin hin qabnee hubatee beeksisuu qaba, kun karaa miidiyaatiin akka ummata keenyaaf if ta’u hubachiisaa” jechuun Qondaalli Tikaa Ol’aanaan kun haala guyyaa kaleessaa irraa kaasee hanga har’aatti magalaa Burraayyuu Keessatti ta’e nuuf ibseera.
Akka Qondaalli kun nuuf ibsetti tarrisni maqaa Poolisoota Boonbiin irratti darbatamuun madaahani,
4.Konistabile Sadam Abraahim
5.Sajin Shamil fi
6.Sajin Sabsiib dabalatee, Dubartoota Poolisootaaf nyaata hojjetan Adde Jittuu fi Gaddiise kan jadhamaniis akka keessatti argaman Qondaalli kun dabaluun Ifa Taasiseera.
January 24, 2019 – Oromia police and Federal police
Previous articleThe Genocide, the State of Emergency and a Referendum in Sidama: Contradictions in Fact and Law
Next articleOMN: Qophii Ayyaana Qaammee (Waggaa Haaraa) : Kutaa 1ffaa fi 2ffaa